Ahoana ny fomba pixelate ny ampahany amin'ny sary ao amin'ny Adobe Photoshop ao anatin'ny dingana 3 | Famoronana an-tserasera
Ahoana ny fomba pixelate ny ampahany amin'ny sary amin'ny Adobe Photoshop
Indraindray isika dia mila manisy pixelate faritra misy sary (tarehy, takelaka, adiresy ...) na hoe te-hanao azy io fotsiny isika mba hanomezana sary an-tsary ny sarintsika. Raha ny marina dia misy mpamorona sary mampiasa piksel amin'ny endriny, satria holazainay aminao izany lahatsoratra momba an'i Yuni Yoshida. Ato amin'ity lesona ity dia asehoko anao ny fomba pixelate ampahany amin'ny sary ao amin'ny Adobe Photoshop, mora sy haingana Aza adino izany!
1 Sokafy ny sary ao amin'ny Photoshop ary hiova ho Smart Object
2 Safidio ny ampahany tianao hasiana piksela
3 Ampiharo ny sivana pixelize
4 Vokany hafa pixelated
Sokafy ny sary ao amin'ny Photoshop ary hiova ho Smart Object
Handeha isika sokafy ao amin'ny Photoshop ny sary fa te-pixelate izahay, ohatra, nisafidy an'ity aho saingy azo atao amin'ny sary rehetra. Manaraka, hanokatra ny sosona ao ambadika isika ary manindry azy ny hivadika ho zavatra marani-tsaina isika
Safidio ny ampahany tianao hasiana piksela
Hisafidy an'ity sosona ity isika ampahan'ny sary izay tianay pikantsary. Azonao atao ny mampiasa ilay fitaovana tianao indrindra, ilay iray hainao indrindra (ilay fitaovana fifidianan haingana, ny tehina, ilay fitaovana fifantina zavatra ...). Amin'ireto tranga ireto, izay tsy ilaintsika ny fisafidianana ho madio sy lavorary, dia mamporisika anao hampiasa ilay safidy ianao mifidy lohahevitra (izay miseho ao amin'ny menio safidin'ny fitaovana rehefa manindry ny fitaovana fisafidianana). Rehefa mampihatra lohahevitra voafantina ianao dia mijerijery ary mifantina tena marim-pototra ny Photoshop.
Raha hitanao fa misy lesoka lehibe, afaka manitsy foana ianao amin'ny fampiasana maska ​​fifantina, eto amin'ity bokotra ity. Ohatra, hanatsara ny fisafidianana ny sandry aho. Hampidiniko ny mangarahara ary amin'ny borosy no handokoako ity ampahany tafatsoaka ity.
Ampiharo ny sivana pixelize
Vantany vao vita ny safidy, eo amin'ny menio ambony mitady: Filter. Mandeha pixelize ary safidio ny safidy Mosaic. Hisokatra ny varavarankely izay azonao atao ny manova ny haben'ny pixel. Amboary araka ny itiavanao azy ary kitiho ny topi-maso raha hijery ny endriny, avelako eo amin'ny 35 izy.
Araka ny hitanao, vantany vao manery OK ianao dia hovonoina ho azy ny sarontava, mba hahafahanao mampihatra an'ity sivana ity amin'ilay sary ary mbola mitazona ilay voalohany. Ary koa, raha te pikseling ianao dia ampahany amin'ny safidio pAzonao atao ny misafidy ny saron-tava ary miaraka amin'ny borosy dia asio na ampio faritra. Miaraka amin'ny mainty, hofongaranao ny safidinao ary amin'ny fotsy dia hanampy faritra izay hampiharana ny pixelation ianao.
Ity ny vokatra farany:
Vokany hafa pixelated
Hasehoko anao ny vokatra hafa mahaliana pixelated. Averinay ny dingana. Ao amin'ny zavatra marani-tsaina dia hisafidy ny faritra irina isika ary hankany amin'ny kiheba Sivana> Pixelize. Tamin'ity indray mitoraka ity, fa tsy mozika, tsindrio eo amin'ny crystallize.
Mbola hisokatra varavarankely ho anao hamaritana ny haben'ny piksela, amin'ity indray mitoraka ity dia tsy ho efa-joro izy io, farito ny habeny ary ny fikitihana OK dia hamorona sarontava sarontava.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Ahoana ny fomba pixelate ny ampahany amin'ny sary amin'ny Adobe Photoshop
Avadiho ny jpg ho jpg
Ahoana ny fanesorana mari-drano amin'ny sary ao amin'ny Photoshop